Progressive Voice Myanmar » Civil Society Statement on the so-called “Cyber Security Bill” အာဏာသိမ်း စစ်အုပ်စု၏ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဥပဒေ (မူကြမ်း) ဆိုသော ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထား ကြေညာချက်
Home Resources Statements Civil Society Statement on the so-called “Cyber Security Bill” အ...
Statement 264 Views
February 11th, 2021 • Author: 239 Myanmar Civil Society Organizations •6minute read
We, the undersigned civil society organizations, reject the so-called “Cyber Security Bill” drafted by the current military regime, which has not been entrusted by the people with legislative power.
On9February 2021, the Ministry of Transport and Communications issuedadirective enclosing the so-called “Cyber Security Bill” – which violates the principles of digital rights, privacy and other human rights – and circulated these documents to mobile operators and telecommunications license holders for comments.
Firstly, as this “bill” is not issued by an institution that has been entrusted with legislative power by the public to act accordingly, we do not accept this asalegitimate bill.
Secondly, the “bill” includes clauses which violate human rights including the rights to freedom of expression, data protection and privacy, and other democratic principles and human rights in the online space. As the “bill” is drafted by the current military regime to oppress those who are against its rule, and to restrict the mobilization and momentum of online resistance, we strongly condemn this action by the current military regime in accordance with our democratic principles.
The issuance of the “bill” is evidence that the military has not only attemptedacoup d’état, but is also exercising undue legislative power unlawfully to oppress the public.
If this unlawful action by the current military regime is not denounced strongly in time, military oppression over the country will be long lived and we, the undersigned civil society organizations, strongly condemn this action by the current military regime and issue the following statements –
1. We do not accept and we strongly condemn the military coup d’état and demand the current military regime to return the power to the public immediately without any exceptions.
2. We do not accept, acknowledge or comply with this “bill” and directive as well as any other future “bills” that may be drafted by the current military regime in an attempt to oppress the people.
3. We strongly demand the current military regime to halt any undemocratic practices.
အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုက ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဥပဒေ (မူကြမ်း) ဆိုသော စာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်ရာ ၎င်းအား ရေးဆွဲသူများမှာ ပြည်သူက ဥပဒေပြုအာဏာအပ်နှင်းထားသူများ မဟုတ်သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများက ယင်း စာအပေါ် ဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပင် လက်ခံနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဥပဒေ (မူကြမ်း) ဆိုသည့် ဒီမိုကရေစီလုပ်ထုံးလုပ်စဉ်များနှင့် ဆန့်ကျင်သော ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ပြန်ကာ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု လိုင်စင်ရရှိသူများကို သဘောထား မှတ်ချက်တောင်းခံလာကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
၂။ ကနဦးအချက်အနေဖြင့် ယင်းကိုရေးဆွဲသူများမှာ အများပြည်သူက အပ်နှင်းသော အာဏာကို ရရှိထားသူ အစိုးရက ခန့်အပ်ထားခြင်း မဟုတ်သည့်အတွက် ထိုဥပဒေ (မူကြမ်း)ဟူသော အရာသည် မည်သည့် တရားဝင်ခြင်းမျှ မရှိဘဲ စာရွက်တစ်ရွက်အဖြစ်သာ ရှိသည်ဟု မိမိတို့မှ လက်ခံထားသည်။
၃။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါဝင်သည့်အချက်များသည် အများပြည်သူ၏ အွန်လိုင်းပေါ်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ အချက်အလက်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံပိုင်ခွင့် အစရှိသည့် အခွင့်အရေးများအပြင် အခြားအခြေခံအကျဆုံးသော ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ ကိုလည်း ဆိုးရွားစွာ ချိုးဖောက်ကာ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုက ၎င်းတို့အား ပြည်သူလူထုက အွန်လိုင်းတွင် ဆန့်ကျင်ရေးသား၊ လှုပ်ရှားနေမှုများကို ကန့်သတ်ရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင် ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းအာဏာရှင်အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကို မိမိတို့အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက မိမိတို့ ရပ်တည်ရမည့် လမ်းစဉ်ကို မြဲမြံစွာကိုင်စွဲရပ်တည်လျက် ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချလိုက်သည်။
၄။ အဆိုပါ ဥပဒေမူကြမ်းအမည် တပ်ထားသော ထုတ်ပြန်ချက်သည် အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုက အုပ်ချုပ်မှုအာဏာကို မတရား သိမ်းယူရုံသာမက၊ ဥပဒေပြုရေးအာဏာကို တရားမဝင်ကျင့်သုံးပြီး လူထုကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဖိနှိပ်ရန် စတင်ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့က မှတ်ယူသည်။
၅။ သို့ပါ၍ ယင်းကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မှုကို အချိန်မီမတွန်းလှန်နိုင်လျှင် ပြည်သူ့အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးလျက် ဖိနှိပ်အုပ်စိုးမှုကို ဆက်လက်သက်ဆိုးရှည်စေနိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများအနေဖြင့် တိုင်းပြည်အာဏာကို မတရားသိမ်းယူထားသည့် စစ်အုပ်စုက ထိုသို့ လုပ်ဆောင်လာမှုကို လုံးဝ (လုံးဝ) ရှုတ်ချကာ ၎င်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စု သိရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများက အောက်ပါ ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများသည် –
၁။ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စု၏ တရားမဲ့ အာဏာသိမ်းယူမှုကို (လုံးဝ) လက်မခံ၊ ပြင်းထန်စွာ ရှတ်ချပြီး ပြည်သူ့အာဏာကို ပြည်သူအား ချက်ချင်း၊ ခြွင်းချက်မရှိ ပြန်လည်အပ်နှင်းရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
၂။ အာဏာသိမ်း စစ်အုပ်စုက ဥပဒေပြုရေးအာဏာကို တရားမဝင်ကျင့်သုံးကာ လူထုကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဖိနှိပ်ရန် ကြိုးစားမှု အစဖြစ်သော အဆိုပါ ဥပဒေ မူကြမ်း ဆိုသည့် ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် မည်သည့် ထုတ်ပြန်ချက်၊ ဥပဒေပြုမှုမျိုးကို မဆို ကျွန်ုပ်တို့ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများက (လုံးဝ) အသိအမှတ်ပြု လိုက်နာမည် မဟုတ်ကြောင်း သိစေအပ်သည်။
၃။ ထို့အပြင် အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စု၏ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့် လုံးဝ မကိုက်ညီသည့် အခြားသော ပြုကျင့်မှုများ အားလုံးကိုလည်း ချက်ချင်း ရပ်တန့်ရန် အပြင်းထန်ဆုံး တောင်းဆိုလိုက်သည်။
Action Committee for Democratic Development (ACDD)
Action Group for Farmers Affair (AGFA – Mandalay)
Action Group for Farmers Affair (AGFA – Ayeyarwady)
Action Group for Farmers Affair (AGFA – Bago)
Action Group for Farmers Affair (AGFA – Magway)
Action Group for Farmers Affair (AGFA – Sagaing)
All Arakan Students’ and Youths’ Congress-AASYC
Arr Marn Thit Social Development Organization
Ahlin Tagar Rural Development Organization
Athan – Freedom of Expression Activist Organisation
Ayyar Pyo May Women Development Organization
AYY Famar Union
Ayeyawady West Development Organization- AWDO (Magway Region)
Bandugavlar Civil Call(BCC)
Child Prevention Network
Civic Engagement Development Network
Civic Engagement Network for M2
Community Partners Myanmar (Nae Thit Foundation)
COMREG Community Response Group
Digital Rights Collective
Diversity and Public Truth
Doe Myae Civil Social Development Organization
Empower Youth Enlightenment (EYE)
Famar Agricultural Network
Farmers Network (ဝမ်းတွင်း)
Farmers and Land Rights Action Group
Farmers Development and Environmental Watch Group
လွတ်လပ်သော ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မြန်မာ
Free Education Service Organization
FREELAND Organization Lashio
Future Star (မတ္တရာ)
Future Light Social Development Organization
Genuine People’s Servants – GPS
Golden Future Social Development Organization
Green Justice Institute (GJI)
Hope For Children Development Organization
Htum Thit Sa Rural Development Organization
Human Rights Defenders & Promoters (HRDP)
Human Rights Educators Network
Human Rights Foundation of Monland (HRFOM)
International Bridges to Justice (Myanmar)
Justice For All (လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် တရားမျှတမှု့ )
Justice Movement for Community Inlay
Kaung Myat Hnalonethar Health Care Organization
Kan Chay Arr Man Fishery Development Organization
Karenni State Farmer Union
Kachin Women Union
Kanpetlet Land Development Organization
KESAN Karen Environment and Social Action Network
Kyaukse Youth Network
Lamyan Farmers Network
LatButta Famar Union
LGBT rights Network
Light Social Development Organization
Mandalay Affairs Team
Mandalay Regional Youth Association (MRYA)
Mandalay Regional Youth Network
Mandalay Women Political Federation (MWPF – မန္တလေး)
Mann Thingaha (Gender GBV Team)
Maramagri Youth Network
Matupi Women Association
Meiktila Youth Network
Minhla Youth Center
ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် မြန် အိုင်စီတီအဖွဲ့ (MIDO)
Myanmar Deaf Society
Myanmar Fifth Estate
Myanmar Independent Living Initiative
Myanmar Muslim Youth Association (Kachin State)
National Network for Education Reform
သဘာဝစိမ်း သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး မိတ်ဖက် အင်အားစု
Never End Tomorrow(NeT)
Ninggawn Institute (NI)
Northern Spectrum Youth Association
Open Development Foundation
P.D.C.E (Peace, Development & Civic Engagement)
Pan Thi Kyo LGBT Organization
Peace & Development Center (Meikhtila)
Peace Development Committee (မိတ္ထီလာ)
Phyu Sin Myittar Social Development Organization
Rural Social Development Organization
SarPhyu Famar Network
Sarnar Kyi Phyu Social Development Organization
Shan State Ethnic Youth Federation
Shan Women Development Network
Shwe Nathar Famar Development Organization
Socio- Economic & Gender Resource Institute
Social Care Volunteer Group (SCVG)
Southern Youth Development Organisation
Swam Su Ti Rural Development Organization
Ta’ang Women’s Organisation
Tai Youth Organization – TYO
TEN, Taunggyi Education Network
Thazi Youth Network
The Seagull: Human Rights, Peace & Development Pluralistic Society
The Khumi Institute (TKI)
Unity Arch Bridge Organization
Waingmaw CSO Network
White Marker Group
Women & Youth’s Development Organization (WYDO)
Worker Development Organization
Women organization Network ( WON )
Yatanar Youngyi Social Development Organization
Yai Ywal Yar Youth Development Organization
Yi Ywal Yar Community Development
Youth Champion Network
Young Ni Oo Women Social Development Organization
မဇ္စျိမမေတ္တာ ရေလှူအသင်း (မိတ္ထီလာ)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လူငယ်ရေးရာကော်မတီ ကိုယ်စားလှယ်များ
ရွှေမင်းသား မသန်စွမ်း ဖောင်ဒေးရှင်း ( မြန်မာ )
Gender and Development Institute
Good Shepherd Myanmar Foundation (GSMF)
Myanmar Positive Women Network
Mandalar Yaung Sin
Myanmar Independent Living Initiative- MILI
National Network of Rural Women- May Doe Kabar
Phan Tee Eain (Creative Home)
Ratana Metta Organization
Sex Worker in Myanmar Network
Socio-Economic & Gender Resource Institute Myanmar
Student Christian Movement Myanmar
Women’s Federation for Peace